Vaginal Rejuvenation/Vaginal tightening - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ဒီတဈခေါကျမှာတော့ အမြိုးသမီးလိငျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးနဲ့ပတျသကျပွီး အမြိုးသမီးတှေ ခံစားရလရှေိ့တဲ့ ဝဒေနာတဈမြိုးအကွောငျး ရှငျးပွပေးခငျြပါတယျ
အခုလို တိုးတကျနတေဲ့ ခတျေမှာတောငျ အမြိုးသမီး လိငျအင်ျဂါ အစိတျအပိုငျးဖွဈတဲ့ Vagina (မိနျးမ ယောနိ) နဲ့ Vaginal tract (မိနျးမကိုယျ သားမှေးလမျးကွောငျး)တို့နဲ့ပတျသကျပွီး ကွုံတှနေ့ရေတဲ့ တဈခြို့အခကျအခဲတှကေို ပွောပွဖို့အတှကျ မွနျမာအမြိုးသမီးတှေ ရှကျရှံ့နတေတျကွပါတယျ
အမှနျတကယျတော့ အသကျကွီးလာတာနဲ့အမြှ အမြိုးသမီးတှဟော လိငျအင်ျဂါအစိတျအပိုငျးနဲ့ ပတျသကျပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုတှေ တဈဖွညျးဖွညျး လြော့နဲလာတတျပါတယျ
ဘာလို့လဲဆိုတော့ collagen fibre လို့ချေါတဲ့ အမြှငျဓါတျလေးတှေ နဲပါးလာတဲ့အတှကျ ခန်ဓာတဈခုလုံးမှာ အသားအရတှေေ လြော့ရဲလာတဲ့အပွငျ အမြိုးသမီး အင်ျဂါ လမျးကွောငျးကလဲ လြော့ရဲလာလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ
ဒါပမေယျ့ တတျကြှမျးနားလညျတဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျကုသမယျဆိုရငျ မကျြနှာ အရပွေားလေးတှကေို တငျးရငျးပွီးနုပြိုအောငျ လုပျလို့ရသလို အမြိုးသမီး အင်ျဂါလမျးကွောငျးကိုလဲ ကနျြးမာပွီး တငျးရငျးနအေောငျ ကုသမှုခံယူလို့ရပါတယျ
မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျးက ဘာလို့လြော့ရဲ လာရသလဲဆိုရငျ?
သားအိမျဖွတျထုတျထားခွငျးနှငျ့ အခွားသော ခှဲစိတျမှုအမြိုးမြိုး လုပျဆောငျထားခွငျး တို့ကွောငျ့ လြော့ရဲလာရခွငျး ဖွဈပါတယျ
ကာမဆကျဆံနစေဉျ သို့မဟုတျ ဆကျဆံပွီးနာခွငျး
ကာမပွညျ့ဝစှာ ခံစားမှု မရရှိခွငျး
သားမှေးလမျးကွောငျ့ရဲ့ အတှငျးဘကျလမျးကွောငျး တဈလြှောကျကို အပူလှိုငျးလဆောဖွငျ့ နာကဉျြမှုမရှိဘဲ အခြိနျတိုတိုနဲ့ ကုသလို့ရနေ ပွီပဲဖွဈပါတယျ
သားမှေးလမျးကွောငျးမှာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှကေို တငျးရငျးစပွေီး ကာမ ခံစားမှုလဲ ကောငျးမှနျစတေဲ့ treatment တဈခုလဲဖွဈပါတယျ
G spot လို့ချေါတဲ့ မိနျးမကိုယျတှငျးမှာ ကာမ ခံစားမှုပေးတဲ့ နရောကို filler ထိုးပွီး ကုသလို့ရပါတယျ filler ထိုးခွငျးဖွငျ့ သားမှေးလမျးကွောငျး ခွောကျသှမှေု့ကိုလဲ သကျသာစပေါတယျ
မိမိ၏သှေးရညျကွညျဖွငျ့ သားမှေးလမျးကွောငျးကို ကုသခွငျးဖွငျ့လဲ ဆီးမထိနျးနိုငျခွငျးကို သကျသာစတေဲ့အပွငျ သားမှေးလမျးကွောငျး ခွောကျသှခွေ့ငျး နှငျ့ ကာမဆကျဆံနစေဉျ နာကငျြမှုတို့ကို လြော့ခနြိုငျမှာဖွဈပါတယျ
4)နောကျဆုံးနညျးပညာ တဈခုဖွဈတဲ့ Collagen ကွိုးသှငျးပွီးလဲ သားမှေးလမျးကွောငျး ကဉျြးအောငျ ကုသနိုငျပါတယျ
ခှဲစိတျကုသခွငျးဖွငျ့လဲ မိနျးမကိုယျ သားမှေးလမျးကွောငျးကို ကဉျြးသှားအောငျ ကုသလို့ရပါတယျ
မိနျးမကိုယျမှာရှိတဲ့ ကွှကျသားတှကေို အကြုံ့အဆနျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးပွုလုပျခွငျးဖွငျ့လဲ ကွိုတငျကာကှယျလို့ရပါတယျ
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အမျိုးသမီးလိင်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးတွေ ခံစားရလေ့ရှိတဲ့ ဝေဒနာတစ်မျိုးအကြောင်း ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်
အခုလို တိုးတက်နေတဲ့ ခေတ်မှာတောင် အမျိုးသမီး လိင်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Vagina (မိန်းမ ယောနိ) နဲ့ Vaginal tract (မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်း)တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကြုံတွေ့နေရတဲ့ တစ်ချို့အခက်အခဲတွေကို ပြောပြဖို့အတွက် မြန်မာအမျိုးသမီးတွေ ရှက်ရွံ့နေတတ်ကြပါတယ်
အမှန်တကယ်တော့ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း လျော့နဲလာတတ်ပါတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ collagen fibre လို့ခေါ်တဲ့ အမျှင်ဓါတ်လေးတွေ နဲပါးလာတဲ့အတွက် ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာ အသားအရေတွေ လျော့ရဲလာတဲ့အပြင် အမျိုးသမီး အင်္ဂါ လမ်းကြောင်းကလဲ လျော့ရဲလာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်
ဒါပေမယ့် တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ကုသမယ်ဆိုရင် မျက်နှာ အရေပြားလေးတွေကို တင်းရင်းပြီးနုပျိုအောင် လုပ်လို့ရသလို အမျိုးသမီး အင်္ဂါလမ်းကြောင်းကိုလဲ ကျန်းမာပြီး တင်းရင်းနေအောင် ကုသမှုခံယူလို့ရပါတယ်
မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းက ဘာလို့လျော့ရဲ လာရသလဲဆိုရင်?
သားအိမ်ဖြတ်ထုတ်ထားခြင်းနှင့် အခြားသော ခွဲစိတ်မှုအမျိုးမျိုး လုပ်ဆောင်ထားခြင်း တို့ကြောင့် လျော့ရဲလာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
ကာမဆက်ဆံနေစဉ် သို့မဟုတ် ဆက်ဆံပြီးနာခြင်း
ကာမပြည့်ဝစွာ ခံစားမှု မရရှိခြင်း
သားမွေးလမ်းကြောင့်ရဲ့ အတွင်းဘက်လမ်းကြောင်း တစ်လျှောက်ကို အပူလှိုင်းလေဆာဖြင့် နာကျဉ်မှုမရှိဘဲ အချိန်တိုတိုနဲ့ ကုသလို့ရနေ ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
သားမွေးလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို တင်းရင်းစေပြီး ကာမ ခံစားမှုလဲ ကောင်းမွန်စေတဲ့ treatment တစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်
G spot လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းမကိုယ်တွင်းမှာ ကာမ ခံစားမှုပေးတဲ့ နေရာကို filler ထိုးပြီး ကုသလို့ရပါတယ် filler ထိုးခြင်းဖြင့် သားမွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့မှုကိုလဲ သက်သာစေပါတယ်
မိမိ၏သွေးရည်ကြည်ဖြင့် သားမွေးလမ်းကြောင်းကို ကုသခြင်းဖြင့်လဲ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းကို သက်သာစေတဲ့အပြင် သားမွေးလမ်းကြောင်း ခြောက်သွေ့ခြင်း နှင့် ကာမဆက်ဆံနေစဉ် နာကျင်မှုတို့ကို လျော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
4)နောက်ဆုံးနည်းပညာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Collagen ကြိုးသွင်းပြီးလဲ သားမွေးလမ်းကြောင်း ကျဉ်းအောင် ကုသနိုင်ပါတယ်
ခွဲစိတ်ကုသခြင်းဖြင့်လဲ မိန်းမကိုယ် သားမွေးလမ်းကြောင်းကို ကျဉ်းသွားအောင် ကုသလို့ရပါတယ်
မိန်းမကိုယ်မှာရှိတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အကျုံ့အဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်လဲ ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်